Indlela yokuthenga i-backlinks ye-PR9?
Inani lezithuthi ezingenayo kunye nezixhumanisi zangaphandle zizinto ezimbini nawuphi na umnini wewebhusayithi ofuna ukucingisisa ngaphambi kokugqiba impumelelo yomthombo wewebhu. Umthombo wewebhu ngaphandle kokuqhutyelwa kwendlela yokuhamba kwezithuthi ayinakuyithathwa njengempumelelo, kwaye umthombo wewebhu ngaphandle kokuguqulwa kwendlela ayikwazi ukuba khona.
Makhe sicinge imeko omele ukhethe phakathi kwendawo ephezulu ye-PR kunye nokujikeleza kwe-traffic kunye ne-PR ephantsi kunye neentsuku ezi-2000 zeentsuku zonke.Uya kukhetha ntoni? Unokukhetha ikhonkco elandelwayo ukusuka kwisiza se-PR ephezulu, okanye ungafaki isixhumanisi kwisayithi ephantsi ye-PR. Ewe, kunzima ukukhetha phakathi kwezi zimbini. Ukuba uya kwixesha elilodwa, uzakufumana iitoni zezithuthi, kwaye ukuba uya kulandela, uya kufumana ukwanda kwinqanaba.
Kubalulekile ukuqonda umahluko phakathi kweefayili kunye neenfayile ezilandelayo. Ukudibanisa ne-tag ye-nof yenze iinjongo zokukhangela ukuba ungalandeli indawo yakho ngekhonkco okanye ukuvimbela ijusi yokuxhumela kuyo. Ukudibanisa kunye negama lokulandela, kwixesha lawo, tshela iinjongo zokukhangela ukuze ulandele iblogi yakho okanye igalelo lekhasi elikwinqanaba lakho kunye nawe.
I-Webmasters bavame ukulahla izimvo kwii-blogs ngenxa yokubaluleka kwenkqubo yokukhangela injini. Ukuziphatha okunjalo kukhokelela kumanqanaba aphezulu egaxekile. Yingakho inani elikhulu leeblogi ezingabonakaliyo kwiintsuku zethu.
Yintoni ebaluleke kakhulu kwizithuthi okanye kwi-backlink kunye nendlela yokufumana zombini?
Iingeniso zendlela zothutho
Ngokungangabazeki, i-traffic iyona mfuneko ephambili yezo shishino njengoko yindlela yokufumana ukubuyela okuphezulu kwiityalo-mali. Ukubuza umbuzo kutheni uhlakulele ishishini lakho kwi-intanethi? Impendulo ngokuqhelekileyo iya kuba yinto efanayo - ukufumana enye ithrafikhi kwaye uyiguqule ekukhokhelweni. Ukongezelela, ukwandiswa kwendlela yokuthengisa kwakha igama lakho lomnatha kwi-intanethi kunye namagunya akho kwi-media media. Unokwandisa i-traffic yakho ngokusebenzisa iziteshi zoononophelo zoluntu rhoqo. Kwaye emva koko, i-traffic yakho ephakamileyo, ephakamileyo yengeniso yakho. Nangona kunjalo, kukho enye inzuzo ebalulekileyo yendlela - ayiyiyo isigxina.
Ingqina eliyaziwayo ukuba i-backlink ibulala ephakathi kwiphina inkqubo yokuphucula injini.Ukwandisa kwi-backlinks kukunika isikhundla esiphezulu kwiphepha lekhasi lokukhangela ukwandisa ukuthengisa kwakho. Okuphakamileyo kwinqanaba lakho, abathengi abangakumbi banokukwazi malunga nomkhwa wakho. Ezinye i-backlink ziyakwenza isitampu ngokusisigxina, kukunikezela ngokuhamba okungapheliyo kwezithuthi. Nangona kunjalo, kungakhathaliseki ukuba umgangatho wezixhumanisi zakho ezingenayo, i-Google ingabhawula okanye ihlawulise indawo yakho. Ukuba le nkqubo ifumanisa iifowuni zakho ezingafumaneki ngokufanayo, uya kufumana izigwebo ezinzima ezinokunciphisa i-traffic kunye neentengiso.
Yingakho, kubalulekile ukusebenzela i-traffic, kungekhona kwi-backlink ukufumana ukuhamba kweetrama kwiziko lakho, kuya kufuneka ukhethe izixhumanisi ezingenayo nanini. Ngoko ke, ukuba ufuna i-backlinks, sebenzela i-traffic.
Imithombo enjalo yewebhu njenge-Websiteoutlook, i-Alexa, i-Quantcast, ne-Aboutdomain inokukwazi ukufumana i-backlinks ephezulu kwixesha. Ukufumana iiwebhusayithi ezifana nalezi, unokwenza uphando lwewebhu phakathi kweziza kwi-niche yakho. I-Web crawlers isicabucu ngezi ziko rhoqo, yingakho ithuba lakho lokufumana i-site yakho ifakwe kwi-imeyile ngokukhawuleza. Hambisa umthombo wakho wewebhu kwiinkalo ezininzi zezixhobo zokuhlalutya, kwaye uya kugcina i-rankings yanda ngaphantsi kweeyure ezingama-24 Source .